Madaxweynaha Jabuuti Oo Amar Yaab leh Siiyay Ciidamadiisa Ku Sugan Soomaaliya [Warbixin].
Sunday August 19, 2018 - 08:38:06 in Wararka by Super Admin
Kumanaan katirsan ciidamada Jabuuti ee ku sugan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii lagu miciya siibay dagaalka jabhadeyska ah ee dalka ka socda.
Ciidamada Jabuuti iyo kuwa Itoobiya ayaa iska barbar dagaallamayay lixdii sanadadood ee lasoo dhaafay balse waxaa kala geeyay weerarada isdaba joogga ah ee uga imaanaya xoogaga Al Shabaab.
Saraakiisha Itoobiya iyo kuwa Jabuuti ayaa isku khilaafsan habsami usocodka dagaalka gobolka Hiiraan heer Taliyaha ciidamada Jabuuti uu Itoobiyaanka ku eedeeyay khiyaano iyo in ay furimaha dagaalka uga baxeen.
Illaa sedax degmo ayay Jabuutiyaanku ka heystaan gobolka Hiiraan laba degmo ciidamada Itoobiyaanka ayaa uqabtay halka degmada kale ay ugacan geliyeen ciidamada Burundi ee qeyb ka ah soo duulayaasha AMISOM.
Ciidamada Jabuuti waxay ka badin waayeen in ay iskusoo oodaan Godad waaweyn oo ay ka qoteen magaalooyinka Jalalaqsi, Buula Burde iyo Beled Weyne halkaas oo ay fuxshi iyo dhaqan xumo ku faafiyeen.
Hareerayn raagtay oo xoogaga Al Shabaab kusoo rogeen magaalada Buula Burde ayaa nolol cusub bartay ciidamada Jabuuti, weeraro dhabbagal ah oo Al Shabaab ay udhigtay kolonyada ciidamada marka ay isku gudbinayaan saadka ayaa sababay dhimashada tobaneeyo askari arrinkaas oo sababay qaadashada go'aamo layaab leh.
Madaxweynaha Jabuuti ismaaciil Cumar Geelle ayaa saraakiishiisa ku sugan Soomaaliya soo gaarsiiyay amar guud oo ah in ciidamadu ya aysan sameyn karin wax dhaqaaq ah!.
Ilo wareedyo ay heshay SomaliMeMo ayaa sheegaya in Hoggaanka ciidamada Jabuuti ay fareen askarta iyo saraakiisha in aysan ka bixi karin saldhigyada ay uga suganyihiin sedaxda magaalo ee ay ka joogaan gobolka Hiiraan haddii ay ka dhega adeygaanna ay qaadayaan mas'uuliyadda wixii gaara.
"Askarigii lagu dilo meel ka baxsan magaalada uu ku suganyahay wax megdhaw ah maheli doono isaga ayaana mas'uul ka ah wixii gaara" sidaas waxaa ciidamada usheegay sarkaal Jabuutiyaan ah.
Saraakiisha qaar ayaa cabasho ka muujiyay go'aankan waxayna codsadeen in loo ogolaado in ay maandooriyaha khaatka suuqyada kasoo iibsadaan balse ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka dhega adeygay wuxuuna uballan qaaday in khaat gaar u ah loogu geynayo saldhigyada ballanqaadkaas oo uu ka dhabeeyay oo maalin walba diyaarado khaat sida ayaa ka degay garoomada magaalooyinka Buula Burde,Beled weyne iyo Jalalaqsi.
"Madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday in wax walba oo aad ubaahataan laydinkugu keenayo magaalooyinka aad joogtaan oo aadan wax roondda ah sameyn karina" ayuu yiri taliyaha ciidamada Jabuuti.
Ismaaciil Cumar Geelle ayaa go'aankan uu qaatay usababeeyay in layareeyo khasaaraha ciidamada kasoo gaari kara weerarada Al Shabaab waqti lagu jiro xilli kala guur ah oo dhammaan dowladaha ku midoobay dalladda AMISOM isku diyaarinayaan bixitaan waxayna umuuqdaan in ay yihiin khasaare ka carar.
Madaxweynaha Jabuuti wuxuu uballan qaaday ciidamadiisa ku sugan Soomaaliya in dhanka hawada loogu geeyo saadka iyo sahayda ay ubaahanyihiin, magaalooyinka Buul Burde iyo Jalalaqsi ayay amarradan ka dhaqan galeen 3 bilood ka hor mana jirin wax dhaqaaq ah oo ay ciidamadu sameeyeen.
Wadada laamiga ah ee isku xirta Beled Weyne illaa iyo Jowhar ayaa sanaddii 5 aad oo xiriir ah go'an waxaana ka caagay gaadiidka ciidamada shisheeye halka gaadiidka dadweynaha ay Al Shabaab uweecisay waddo amni ah.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo sanaddii lasoo dhaafay lageeyay deegaanka Halgan si ay wadada ugu furaan Jabuutiyaanka ayaa wax qaban waaye taas bedelkeedna iyaga ayaa saadka diyaarado loogu daabulaa.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa Itoobiya oo sheeganayay in ay Soomaaliya u yimideen ilaalinta Nabad ayaa kusoo koobmay in ay ilaashadaan oo kaliya Nabadda naftooda waxayna gabeen in ay sugaan amniga askarta iyo madaxda dowladda Federaalka oo banaan yaal unoqday weerarada Al Shabaab.